Xaaf oo shaaciyay cidda ka danbeysa khilaafka sii kordhaya ee Galmudug - Caasimada Online
Home Warar Xaaf oo shaaciyay cidda ka danbeysa khilaafka sii kordhaya ee Galmudug
Xaaf oo shaaciyay cidda ka danbeysa khilaafka sii kordhaya ee Galmudug
Cadaado (Caasimada Online) – Hogaamiyaha maamulka Galmudug Axmed Geele Ducaale Xaaf oo saxaafada kula hadlayey Magalada Dhuusamareeb ee Xarunta Maamulka Galmuug ayaa sheegay in Dowlada Somalia ay ku heyso faragalin xad dhaaf ah.
Xaaf waxa uu sheegay in Khilaafyada ka dhex jira Madaxda maamulka ay kaalin weyn ka qaadaneyso Dowlada Somalia oo uu tilmaamay inay kala kulmayaan caqabado badan.
Xaaf, waxa uu tilmaamay in dowlada Somalia ay ku dhaliilayaan hanaanka ay u wajaheyso Khilaafka, waxa uuna meesha ka saaray inay ka maarmikaraan dhex dhexaadin Dowladeed.
Maamulka Galmudug ayuu sheegay inaanu xiligaan qabin dhibaato buuran, hase ahaatee uu dalbanaayo in dowlada ay ka joojiso faragalinta, sida uu hadalka u dhigay.
Mar uu ka hadlaayay bilowga Khilaafka ayuu cadeeyay in Wasiirka Arrimaha Gudaha Somalia uu ka meermeeray inuu kusoo baxo Khilaafka hase ahaatee ay garteen inay ka maarmaan xalinta Wasiirka Arrimaha Gudaha Somalia.
Xaaf, waxa uu sheegay inuu isku dayay in Wasiirka Arrimaha Gudaha Somalia uu kala hadlayo khilaafka yar yare ee soo kala dhexgalay balse uu ku soo laaban waayay sidaasna ay xamar uga soo tageen.
‘’Waxaa arrintaan u sabab ah dowlada Somalia oo aan iska xilsaarin bilowga Khilaafka, waxaan cadeyneynaa in dowladu ay nagu heyso faragalin Wasiirka arrimaha gudahana waxaan uga digeynaa inuu nagu sii hayo faragalinta’’
“Galmudug weli waa sideedii oo wax dhibaato ah kama dhex jiraan laakin hadalka Wasiirka Arrimaha gudaha Somalia uu yiri waa mid faragelin toos ah ee haka daayo’’
‘’Ka maamul ahaan horay ayaan dowladda uga dalbanay in maamul goboleedayda ay ka deyso faragelinta, balse wey iska indha tireysaa dowlada’’ayuu yiri Xaaf
Sidoo kale, Xaaf ayaa sheegay in faragalin kaga imaadaa Dowlada Somalia ay uga dhigan tahay in dowladu ay sii kala fogeyneyso madaxda maamulka.
Si kastaba ha ahatee, Xaaf waxa uu ugu baaqay ku-xigeenkiisa iyo Guddoomiyaha barlamaanka Galmudug ee Cadaado ku sugan in ay soo dhaweeynayaan,isla markaana ay ka xalinayaan waxwalba oo ay ka tabanayaan.